Adiyisɛm 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 Bere a ɔtew+ nsɔano a ɛto so ason no ano no,+ ɔsoro yɛɛ dinn bɛyɛ dɔnhwerew fã. 2 Na mihuu abɔfo baason+ a wogyinagyina Onyankopɔn anim no, na wɔmaa wɔn ntorobɛnto ason. 3 Afei ɔbɔfo foforo bae begyinaa afɔremuka+ no ho a okura sika aduhuam kuruwa; na wɔmaa no aduhuam+ pii sɛ ɔmfa nka akronkronfo nyinaa mpaebɔ ho mmɔ afɔre wɔ sika afɔremuka a esi ahengua no anim no so. 4 Na aduhuam no wusiw fii ɔbɔfo no nsam kaa akronkronfo no mpaebɔ+ ho foro kɔɔ Onyankopɔn anim. 5 Ɛhɔ ara na ɔbɔfo no faa aduhuam kuruwa no de afɔremuka so gya+ no bi hyɛɛ no mã, na ɔtow guu asase so.+ Na aprannaa+ ne nne ahorow ne anyinam+ ne asasewosow+ bae. 6 Na abɔfo baason a wokurakura ntorobɛnto+ ason+ no siesiee wɔn ho sɛ wɔrebɛhyɛn. 7 Na nea odi kan no hyɛn ne torobɛnto no. Na amparuwbo ne ogya+ a ɛne mogya adi afra bae, na wɔtow guu asase so; na asase no nkyem abiɛsa mu biako hyewee,+ na nnua nkyem abiɛsa mu biako hyewee, na wura momono+ nyinaa hyewee. 8 Na ɔbɔfo a ɔto so abien no hyɛn ne torobɛnto no. Na wɔtow biribi te sɛ bepɔw+ kɛse a ɛrehyew too po mu.+ Na ɛpo no nkyem abiɛsa mu biako dan mogya;+ 9 na ɛpo mu abɔde a wɔwɔ akra no nkyem abiɛsa mu biako wuwui,+ na akorow nkyem abiɛsa mu biako sɛee. 10 Na ɔbɔfo a ɔto so abiɛsa no hyɛn ne torobɛnto no. Na nsoromma kɛse bi a ɛredɛw te sɛ kanea fi soro bɛhwee hɔ,+ na ɛhwee nsubɔnten abiɛsa mu biako ne nsuti so.+ 11 Na nsoromma no din de Awɔnwene. Na nsu no nkyem abiɛsa mu biako dan awɔnwene, na nsu no maa nnipa pii wuwui efisɛ na ayɛ nwene.+ 12 Na ɔbɔfo a ɔto so anan no hyɛn ne torobɛnto no. Na owia nkyem abiɛsa mu biako ne ɔsram nkyem abiɛsa mu biako ne nsoromma nkyem abiɛsa mu biako ho kae, sɛnea ɛbɛyɛ na emu nkyem abiɛsa mu biako beduru sum+ na adekyee nkyem abiɛsa+ mu biako annya hann na anadwo nso saa ara. 13 Na mihui, na metee sɛ ɔkɔre+ bi a watu nam wim+ de nne kɛse ka sɛ: “Munnue, munnue, munnue,+ mo a mote asase so esiane ntorobɛnto+ a aka a abɔfo baasa no rebɛhyɛn no nnyigyei nti!”